स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ मङ्सिर २०७४) | गृहपृष्ठ
Home लगानी स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ मङ्सिर २०७४)
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ मङ्सिर २०७४)
बैङ्कले गत आवमा १ सय रुपैयाँमा प्रतिकित्ता ११ सय ९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२ सय ९० रुपैयाँका दरले २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो, जसबाट करीब ३ अर्ब ४ करोड प्रिमियम जम्मा भएको थियो । राष्ट्र बैङ्कको ८ अर्ब पूँजीको लक्ष्य पु¥याउन यस कम्पनीले आफ्नो पूँजी १०० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्नेछ, जुन आव २०७३/७४ को नाफा र एफपीओबाट सङ्कलन भएको प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण गरेर सम्भव हुने देखिन्छ ।
बैङ्क यो अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा ३८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । कम्पनीले यो त्रैमाससम्म ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उसले ३४ करोड ९४ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।
खुद नाफामा वृद्धि गरेसँगै प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न बैङ्क केही हदसम्म सफल भएको पाइन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४९ दशमलव ७० बाट रू. ४८ दशमलव १८ पुगेको छ । यो अवधिमा पूँजी ४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
यही समयमा जगेडा ६७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैङ्कको जगेडामा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा निष्कासन भएको एफपीओको प्रिमियमले गर्दा जगेडामा वृद्धि भएको पाइन्छ ।
७१ अर्ब ४२ करोड निक्षेप उठाई ३९ अर्ब ८५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
निक्षेप २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह २३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
ऋणसँग पूँजी र निक्षेपको अनुपात अर्थात् ‘ क्रेडिट टु क्यापिटल एण्ड डिपोजिट रेशियो’ ६४ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्र बैङ्कले निर्दिष्ट गरेको विन्दु ८० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनि होे । यसका आधारमा बैङ्कसँग अन्य बैङ्कको तुलनामा आगामी दिन नयाँ कर्जा दिन पर्याप्त पैसा भएको देखिन्छ ।
खुद ब्याज आम्दानी ४१ प्रतिशत वृद्धि भएर ७० करोड २६ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बैङ्कको सञ्चालन नाफा ३९ प्रतिशत वृद्धि भएर ७४ करोड २६ लाख पुगेको छ । आम्दानीमा २ करोड ९ लाख प्रोभिजन घट्न पुग्यो भने जोखीम कोषबाट १ करोड ५ लाख रकम फिर्ता भएको छ ।
बैङ्क निष्क्रिय कर्जामा केही मात्रामा कमी ल्याउन सफल भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव १८ प्रतिशतमा आएको छ भने निष्क्रिय कर्जाका लागि ६५७ दशमलव ७६ प्रतिशत रकम व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३१३ दशमलव ४९, कोषको लागत ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ दशमलव ३५ गुणा र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. २१८५ रहेको छ ।
अन्य बैङ्कले त्यत्ति राम्रो वित्तीय विवरण निकाल्न नसकेको आवस्थामा यस कम्पनीले भने खुद नाफा वृद्धि गर्दै प्रतिशेयर आम्दानी केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको छ । बैङ्कको कष्ट अफ फण्ड थोरै हुनु र बैङ्कको सीसीडी रेशियो ७० प्रतिशतभन्दा मुनि हुनुले पनि कम्पनीले आगामी दिनमा व्यापार फैलाउन निकै सजिलो छ । तर पनि बैङ्कले आक्रामक हिसाबले प्रस्तुत हुन् सकेको छैन । गतवर्षको एफपीओको प्रिमियमबाट कम्पनीले निकै राम्रो बोनस दिन सक्छ । तर ८ अर्ब पूँजीपश्चात् कम्पनीलाई प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न चुनौती कायम नै रहेको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क घट्दो प्रवृत्तिमा
प्रतिरोध २ : २२०० । प्रतिरोध १ : २१०० । हालको अन्तिम मूल्य : २०२२ । टेवा १ : १९५६ । टेवा २ : १९००
यस कम्पनीको १५ नोभेम्बर, २०१७ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टको आधारमा अन्तिम कारोबार मूल्य २ हजार २२ मा छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा २८ अङ्क अर्थात् १ दशमलव ३७ प्रतिशत कम हो । अन्तिम दिनको परिमाण ४ हजार ६ सय ७९ मा रहेको छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा ५ हजार ७ सय १८ कित्ता कम हो ।
२३ जुलाई, २०१७ मा मूल्यले २ हजार ३ सय ९९ को उच्च विन्दु प्राप्त गर्न सके पनि त्यसपछिको उचाइ घटिरहेकोले बजार घट्दो प्रवृत्तिको देखिन्छ । चार्टमा देखिएबमोजिम हाल मूल्य माथिल्लो प्रवृत्ति रेखाको प्रतिरोध क्षेत्रबाट फर्किरहेको देखिन्छ ।
एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : ३१ दिनको ईएमएभन्दा मूल्यको प्रवृत्ति तल रहेकोले बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको सङ्केत गर्दछ र यो ईएमए प्रतिरोधको रूपमा देखिन्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ३७ अङ्कमा रहेको देखिन्छ । यसको प्रवृत्ति बजार सकारात्मक देखिँदैन ।
मैनबत्ती : अघिल्लो दिनको मैनबत्तीले सुटिङ स्टार आकृति बनाएको र अन्तिम दिनको मैनबत्तीले बियरिश मैनबत्ती बनाएकाले बजारमा हाल विक्रेताको चाप रहेको देखिन्छ ।
मूल्यको प्रवृत्ति र उल्लिखित सूचकहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ र हाल बजार प्रतिरोध क्षेत्रबाट अझ केही सच्चिन सक्ने सङ्केत पनि गरेकोले अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्था रहेको देखिन्छ । हालको तत्कालीन प्रतिरोध २१ सयमा रहेको देखिन्छ भने तत्कालीन टेवा १९ सय ५६ मा रहेको देखिन्छ ।